Asa fitaterana: Mila jerena izy ireo fa fototry ny fampandrosoana
lundi, 17 août 2020 23:59
Tena tsapako mihitsy io fahorian'ny mpitatitra io, satria na amin'ny andavan'andro aza dia efa kofona, maika tratra izao krizy izao, efa tao anatiny ny tena ka mahita izao fahoriana izao.
Miangavy ny fitondrana hijery manokana azy ireo, tsy resaka vatsy tsinjo, fa ny asa fitaterana mihitsy, na an-tanety, na anabakabaka, na an-dranomasina. Ny mponina mijaly mandeha tongotra, na ny hery fiarovana aza mihena amin'ny havizanana.
Fototry ny fampandrosaoana izy io, tafiditra amin'ny resaka fitaterana ny lalana, ny sécurité, ny mpandeha, ny varotra mifamezivezy, ny famokarana, ny fambolena sy fiompiana, ny fizahan-tany, ny fahasalamana, ny fampianarana, ny indostria, ny asa tanana.
Fotoana tena hihainoana ireo mpitatitra izao sy fanavaozana tanteraka ny politikam-pitaterana, ny fanavaozana ny parc automobile, ny financement momba izany, ny auto-école, ny permis de conduire, ny ady amin'ny kolikoly eo amin'ny mpitandro filaminana.
Mba fantatsika fa ireo taxi-brousse ireo no manao ny asan'ny Paositra mitondra taratasy, vola, colis...
Raha olona tena zatra fitaterana dia mahatsikaritra fa ny Malagasy dia mila miaraka amin'ny entany hatrany raha mbola azony atao.
Na maro entana aza izy, ka sarahina fiara roa, nefa fiara miaraka miainga sy miaraka tonga, tsy tiany ny entany raha tsy ao ambony lohany na ao anaty soute misy azy, raha ny faniriany aza dia nataony tao ambany sezany avokoa ny entana.
Midika izany fa rehefa tsy afaka mifamezivezy ny fitaterana olona dia tsy misy bizina miainga par commande mail na tél izany eo.
Efa hitan'ny tena avokoa izany hoe olona entina PA (Payable à l'arrivée), tsy mandoa frais fa ny olona hivantanany no mandoa, rehefa tonga ilay mpandeha dia mandositra miletika, trano hafa no tondroany hakana ny vola, tsy mipoitra izy efa ho 30min, ampidinina ny entany natao antoka, jerena ny carton télévision nentiny, biriky avokoa no ao anatiny, ianao efa lonjan'ny toro-maso namakivaky zavona tsy natory sady mangatsiaka.